Ihe na-akpata mmetọ mmetọ: ụdị na mbido mbibi a | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Mmadu na eme oria ojoo n’uwa site n’oru aku na uba ya na ndu anyi bi n’ime ya ugbu a. N'ihi ọrụ ndị a, a na-ebute mmetọ nke na-eme ka ọ ghara imebi ihe ndị dị ndụ ma na-akpata ọnwụ nke ụdị na ebe obibi. Enwere dị iche iche ihe na-akpata mmetọ na ọtụtụ ụdị mmetọ dabere na mmalite na njirimara ya.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe bụ isi ihe kpatara mmetọ na ụdị ha.
1 Ofdị mmetọ
2 Ihe ndị na-akpata mmetọ
2.1 Ihe ndị na-akpata mmetọ ikuku
2.2 Ihe na-ebute nsogbu nke ala
2.3 Ihe butere nbibi mmiri
Tupu anyị amata ihe kpatara ya, anyị ga-amarịrị ụdị ụdị mbibi dị adị:
Nke mmiri: Ọ bụ mmetọ gburugburu ebe obibi nke na-emetụta ma osimiri ma osimiri. Ọ na-awakpo ihe niile dị ndụ na mmiri a na gburugburu ya. Mmetọ mmiri bụ nsonaazụ nke mbupute nke anụ ahụ, kemịkalụ ma ọ bụ ihe ndị dị na mpụga na usoro ndụ ndị a. Mgbe anyị gbanyere mmiri n’ọrụ ugbo n’ime osimiri na ụzọ mmiri ndị ọzọ, ọ na-asọba n’oké osimiri. A na-emetọ mmiri a site na ọgwụ ahụhụ, fatịlaịza, na ahịhịa ahịhịa eji eme ka akuku ihe ubi.
Site n'ikuku: Ọ bụ ụdị mmetọ ọzọ kachasị dị na mbara ụwa. Nke a na - eme mgbe kemịkal na ikuku nke ikuku gbanwere, na - emetụta ihe niile dị ndụ n’ụwa. Mụ anụmanụ na-emetụta karịsịa.
Ala: Ọ bụ otu n'ime ụdị mmetọ gburugburu ebe obibi anyị na-ahụkarị. Ọ na-apụtakarị n'ihi iwebata kemịkal nke na-emetụta ala ala. N’ime mmiri ọgwụ ndị a, anyị nwere ọtụtụ ọgwụ na-egbu ahụhụ, ụmụ ahụhụ na ahịhịa. Ndị kachasị emetụta bụ osisi. Ọ bụ ezie na ụmụ anụmanụ na-emetụtakwa n'ihi na ha na-eri nri na ụmụ anụmanụ ndị na-eri na ala a rụrụ arụ. Ihe mmetọ a nwere ike ịgafe na nri nri ma bulie nsonaazụ na-adịghị mma.
Nsogbu redioaktivu: Otu n’ime ụdị ike a na-ejikarị eme ihe bụ nuklia. Ike a na - ewepụta ihe nwere ike iwepu ihe na - ekpo ekuku na - eri ogologo oge. Ebe ọ bụ na ihe ndị a na-eme ihe n'ahụ na-emetụta DNA nke ihe dị ndụ, na-eduga n'ọgbọ dị iche iche nke nrụrụ na mmụba, ha na-emebi ihe dị ndụ.
Na-achọgharị: Nke a bụ ụdị mmetọ nke oke mkpọtụ na-emepụta n'obodo. Ha bu oru ndi mmadu na ihe ndi na emeputa udidi. Ọ naghị emetụta ndụ nke ihe dị ndụ, mana ọ na-emetụta nri na ọmụmụ ọmụmụ, Mbugharị, yana ọdịmma mmadụ niile.
Ozugbo anyị matara ihe dị iche iche dị adị, anyị ga-enyocha ihe bụ ihe na-ebute mmetọ akụkụ.
Ihe ndị na-akpata mmetọ ikuku
Isi ihe na-akpata mmetọ ikuku metụtara ọkụ nke mmanụ ọkụ (coal, oil and gas gas). Combustion nke ndị a akụrụngwa na-abụkarị na usoro ma ọ bụ arụmọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụzọ njem ndi. N'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọ dị mkpa ịmata ọdịiche dị n'etiti ụlọ ọrụ (dịka ọmụmaatụ, ciment ma ọ bụ nchara) na ụlọ ọrụ ike (ha na-eweta ọkara ọkụ eletrik nke mba anyị na-ere).
O doro anya na oke nke ibu ọrụ maka mmetọ ikuku n'etiti mpaghara ụlọ ọrụ mmepụta ihe na mpaghara ụzọ njem enweghị nke ziri ezi na nke ngalaba njem. Ihe dị ka 80% nke mmetọ ikuku na Spain bụ n'ihi okporo ụzọ.
Na Spain, njem na-ewe ihe dị ka 40% nke ume (nkezi nke 30% na obodo), ọ bụrụ na anyị atụlee usoro zuru ezu nke mmepụta njem, ọnụ ọgụgụ a ga-abawanye na 50%. Mgbe ị na-atụle usoro njem njem zuru oke, ọ bụghị naanị mmanụ ụgbọ ala ahụ ka a ga-atụle (mmefu ume nke ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ nyere), kamakwa nrụpụta nke ụgbọala ahụ, ike ọkụ na-ewepụta n'ichepụta ụgbọala na akụrụngwa, nke na-agafe mgbasa, na ndozi na n'ikpeazụ na scrapping nke ugbo ala.
Ihe na-ebute nsogbu nke ala
Enwere ike imetọ ala site na ebumpụta ụwa ma ọ bụ nke mmadụ. Mgbe ụfọdụ ihe ịtụnanya dọrọ na iyo ihe ndị sitere n'okike na ala, ala nwekwara ike imetọ ya. Nkịtị na-ekesa ọgwụ a na ala na-akpata ta mmiri ọgwụ ndị a dị elu nke na ala apụghị ịnọgide na-eme nri.
Examplesfọdụ ihe atụ nke mmetọ a na-emetọ ihe ọkụkụ na-agbapụta, ọkụ, na mmiri ozuzo acid, bụ́ ndị na-eme ka ikuku ndị na-emerụ ahụ na-abanye na mbara igwe. Mgbe mmiri na-ezo, gas ndị na-egbu egbu ga-ebute ụmụ irighiri mmiri ma mesịa daba n'ime ala. Nsị ndị a nwere ike ime ka ọmụmụ na ogo nke ala belata.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na ụmụ mmadụ bụ isi ihe kpatara mmetọ ala. Site na omume nke mmadụ, anyị na-ewebata ihe mmetọ sitere na isi mmiri sitere na okike. Dịka ọmụmaatụ, oge ọ bụla anyị ji ụgbọ ala, ọ na-emetọ ikuku. Ikuku ndị a na-eso mmiri ụmụ irighiri mmiri, na-eme ka ikuku na-eme ka ikuku, dị ka carbon dioxide, banye n'ime ala.
N’aka ozo, mmepe oru ugbo gha aputakwa ihe mmetuta nitrogenous ndi eji eme nri dika nri ndi mmadu. Fatịlaịza nitrogen a abụghị naanị na-emetụta ala na ihe mejupụtara ya, kamakwa ọ na-emetọ elu ala na mmiri mmiri. Anyị ga-agbakwunye ọgwụ na-egbu ahụhụ, ahịhịa, na hydrocarbon solvents na ndị a na-emerụ emerụ, nke ga-enwe mmetụta na-adịghị mma na gburugburu ebe obibi.
Ihe butere nbibi mmiri
A na-eji ọgwụ na-egbu ahịhịa, ahịhịa na ọgwụ ahụhụ n'ọrụ ugbo iji melite mkpụrụ osisi. A na-ebuga kemịkal ndị a n'oké osimiri site na nzacha na mmiri mmiri. N'ihi ya, enwere mbelata oxygen na-agbaze na mmiri ma ọ nwere ike ịgbakọ na ngwakọta nke ihe ndị dị ndụ.
Ihe nchacha anyị ji arụ ọrụ na igwe na-ebute mmetọ mmiri. Mgbe a na-agbanye mmiri a na gburugburu ebe obibi, a na-emepụta oke nri. A maara oke nri ndị a dị ka eutrophication. Ihe mejuputara ha bu nitrogen na phosphorus.
N'ikpeazụ, anyị nwekwara mmanụ wụfuru nke mmanụ dị ka mmanụ na mmebi nke usoro okike sitere na nsị mmiri nsị.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu gbasara ihe kpatara mmetọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Ihe ndị na-akpata mmetọ
Ulo oru ohuru